Akhriso Magacayada Xildhibaanada deegaan doorashadooda wareejistay | Keydmedia
Akhriso Magacayada Xildhibaanada deegaan doorashadooda wareejistay
Baarlamaanka haatan shaqeynaya ayaa noqday midkii ugu musuq-maasuqa badanaa, marka la eego sida ay kusoo baxeen Xildhibaanada doorashadii 2026, iyadoo hal kursi lagu iibsaday 3 million oo dollar.
MUQDISHO, Soomaaliya - Keydmedia Online waxay heshay qaar ka tirsan magacyada Xildhibaano kamida Baarlamanka Soomaaliya, gaar ahaan Aqalka Hoose oo kuraasta deegaan doorashadooda ka wareejistay halka sanadkii 2016 laga soo doortay cabsi ay ka qabaan in ay kursiga uusoo laaban waayo.
Xildhibaanada oo tiradoodu gaareyso afartameeyo, ayaa waxaa ka mid ah Maxamed C/llaahi Xasan Nuux oo nambar tirsigiisu yahay HOP#274, kaas oo laga soo wareejiyay Gobolka Hiiraan loona soo wareejiyay gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar.
Xildhibaanka ayaa ka soo jeeda qabiilka Jidle oo dega gobolka Hiiraan, waxaana arintaan kursi wareejinta ah kasoo horjeestay Odayaasha beesha Xildhibaanku ka dhashay.
Sidoo kale, Guddoomiye kuxigeenka labaad ee BF Mahad Cawad oo kursiga nambar tirsigiisu yahay HOP#104, ayaa noqday Xildhibaanka ugu kursi rarashada badan Gollaha Sacabka.
Xildhibaanka oo ay deegaan doorashadiisu tahay tuuladda Towfiiq ee gobolka Mudug ayaa haatan Kursigiisa u wareejistay gobolka Galgaduud, waxaana xusdi mudan in sanadkii 2016 lagu doortay magaalada Muqdisho, kadib markii laga soo wareejiyay degmada Cadaado oo uu markii hore ula cararay sababo amni awgood.
Wasiiru dowlaha Gaadiidka C/raxmaan Dheere oo Kursiga number tirsiigusu yahay HOP#124 ayaa u rartay degaan doorashadiisa gobolka Gedo, halka kolkii hore laga soo doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa arintaas ka carooday Dhalinyarada Beesha reer Aw Qudub oo uu Xildhibaanka ka dhashay, iyagoo nasiib daro ku tilmaamay arintaan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay xeerka asteynta Kuraasta , kaasoo awood u siinayo in Xildhibaanka uu kursigiisa u wareejisto deegaanka uu is leeyahay waad ka soo bixi kartaa. Tallaabadan ayaa kahor istaagaysa muwaadiniin badan inay waayaan xaqoodii ahaa in la doorto.
Baarlamaanka haatan jira ee 10aad waa midka ugu musuq-maasuq badan doorashadiisii hore marka la eego, iyadoo aad loola yaabey in hal kursi uu Xildhibaan ku iibsaday 3 milyan oo dollar, iyadoo Xildhibaano badan ay doorteen dad aan isku qabiilba ahayn, sida askarta ilaalada u ah iyo darawaladooda.